लकडाउनमा पनि मिर्गौलाका बिरामीलाई नियमित सेवा
काठमाडौं । भक्तपुरको सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले लकडाउनका बेला पनि डायलासिसका बिरामीलाई सेवा दिइरहेको छ ।
लकडाउनका कारण सुरुका दिन डायलासिसको समय घटाए पनि अहिले केन्द्रले नियमित सेवा दिइरहेको छ । ३० वटा डायलासिस मेसिनबाट सेवा दिइरहेको केन्द्रमा अहिले दैनिक ७५ बिरामीले सेवा लिइरहेका छन् । दैनिक तीन सिफ्ट गरी मिर्गौलाका बिरामीको डाइलासिस गर्दै आएको केन्द्रले जनाएको छ ।
अहिले केन्द्रका चिकित्सक तथा नर्सहरूको आलोपालो गरी सेवा दिइरहेका छन् । लकडाउनको दुई साता पर्याप्त सामान मौज्दात नहुँदा डायलासिसको समय घटाइएको थियो । तर अहिले सबै व्यवस्थापन गरी सबै बिरामीको तीनपटकै डाइलासिस गर्ने गरेको केन्द्रकी नेफ्रोलोजी विभाग प्रमुख डा. कल्पना श्रेष्ठ जानकारी दिइन् ।
केन्द्रमा डाइलासिस गराउने प्रतीक्षासूचीमा भने एक सय ८७ बिरामी रहेको अस्पतालले जनाएको छ । केन्द्रमा अन्तरंग र शल्यक्रियाबाहेकका सबै सेवा लकडाउनको समयमा पनि सञ्चालनमा रहेका केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले बताए । केन्द्रमा आकस्मिक डाइलासिस गर्नुपर्ने बिरामीहरू पनि आउने गरेका छन् ।
दिनमा पाँचदेखि सातजनासम्म आकस्मिक डाइलासिस गर्नुपर्ने बिरामी आउने गरेको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ । केन्द्रमा मिर्गौला तथा कलेजो प्रत्यरोपण गरेका बिरामी तथा दाता बिरामीहरूलाई दिनुपर्ने आकस्मिक उपचारसमेत नरोकिएको उनले बताए । कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन लम्बिँदा मिर्गौला बिरामी प्रभावित हुन थालेका छन् ।
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा अझै एक सातादेखि १० दिनसम्म निषेधाज्ञा थप गर्ने तयारी गरिएको छ । यसका लागि काठमाडौं, भक्तपुर... ६ मिनेट पहिले
काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिका–५, पर्श्याङ, धारापानीमार्गमा डेरा गरी बस्ने धादिङका ३० वर्षीय जितबहादुर गुरुङको कोठामा तास खेलिरहेका गुरुङसहित नौजनालाई प्रहरीले... २१ मिनेट पहिले
हेलम्बु । असार १ गते साँझबाट मेलम्ची नदीमा आएको भीषण बाढीले हेलम्बु क्षेत्र तहसनहस पार्‍यो । मेलच्ची बजारसम्म आइपुग्दा धेरै जनधनको... ४९ मिनेट पहिले